Tababar ku saabsan ka qeybgalka Arrimaha Siyaasadda iyo Doorashooyinka oo Cadaado ka furmay - Home somali news leader
Home NEWS Tababar ku saabsan ka qeybgalka Arrimaha Siyaasadda iyo Doorashooyinka oo Cadaado ka...
Tababar ku saabsan ka qeybgalka Arrimaha Siyaasadda iyo Doorashooyinka oo Cadaado ka furmay
Aqoon is waydaarsi ku saabsan ka qaybgalinta dhalinyarada iyo haweenka arrimaha siyaasada iyo doorashooyinka dalka ayaa waxaa uu maa ta ka furmay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Furitanka Aqoon is weydaarsan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas’uuliyiin ka socotay maamulka degmada Cadaado,dhalinyaro,haween iyo qeybaha kala ee bulshada magaalada Cadaado.
Qabashada aqoon is waydaarsigaan oo ay iskakaashadeen hay’adaha Eisa iyo CRC ayaa waxaa inta uu socdo ka qayb galayaashu ku soo bandhigi doonaan aragtidooda la xariira arrimaha siyaasada iyo doorashooyinka.
Axmed Cabdi Shaakir oo ka socday hay’ada CRC ayaa ka hadlay muhiimada aqoon isweydaarsiga waxana uu sheegay inuu yahay mid la xoojinayo sidii ay dhalinyarada iyo haweenka uga qeybgali lahaayeen arrimaha siyaasadda dalka iyo doorashooyinka.
“Waxaan u mahadcelinayaa dhamman ka qeybgalayaasha aqoon isweydaarsigan iyo maamulka degmada Cadaado oo suurtogeliyay sidii aqoon isweydaarsigan u qabsoomi lahaa.”ayuu yiri Axmed Cabdi Shaakir.
Guddoomiye ku xigeenka Degmada Cadaado Nuur Yarow Xeyle ayaa daahfurey aqoon is weydaarsigan waxana uu kula dardaarmey dhalinyarada inay si hufan uga qayb qaataan mawduuca.
“Nasiib ayay noo tahay in dhalinyarada iyo haweenka ay diyaar u yihiin inay ka qeybgalaan siyaasadda iyo doorashooyinka gaar ahaan xilligan dalka uu marayo xilli doorasho.”ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka degmada.
Aqoon isweydaarsiga maanta ka furmay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa sare loogu qaadayo wacyiga dhalinyarada iyo haweenka si ay ugaga qeybgalaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka.
tababar laga furay degmada cadaado
Previous articleShooters kill dozens in the western Ethiopian region of Benishangul-Gumuz
Next articleMidowga Musharixiinta oo war ka soo saaray jadwalkii ay shaaciyeen Guddiga doorashada